पैदल संचालित इलेक्ट्रिक गिल्योटोन क्यान्सर मिसिन - Bambeocnc
प्रदर्शन र विशेषताहरू
1. हाइड्रोलिक गिलियोटिन कतरनी मिसिन को दोस्रो पीढी।
2. रैक, ब्लेड फ्रेम पुरा वेल्डेड, भित्री तनाव को हटाउन को लागी, राम्रो सटीकता को बनाए राखन को लागि।
3. उन्नत हाइड्रोलिक प्रणाली र राम्रो विश्वसनीयता को प्रयोग गर्नुहोस्।
समर्थन अंतर हटाउन तीन-बिन्दु समर्थन रोलिंग गाइड प्रयोग गर्नुहोस्, कटौती गुणस्तर सुधार गर्नुहोस्।
5. ब्वाँसो बीचको क्लिडन्स ह्यान्डल, सटीक र सुविधाजनक द्वारा समायोजित।
6. आयताकार ब्लेड। किनाराहरू किनारा, र लामो सेवा जीवन।
पानाको विरूपण घटाउन समायोज्य कङ्गन कोण।
8. माथिल्लो ब्लेड फ्रेम इन्फ्रेन्फोन्सन ढाँचा प्रयोग, उत्पादनको शुद्धता सुधार गर्न ब्ल्याकिंग गर्न सजिलो।
9- उप-क्यानर प्रकार्यको साथमा मोटरसाइकल ब्यागेगा, डिजिटल डिस्प्ले।
मोडेल संख्या: QC11Y / के सीएनसी हाइड्रोलिक क्यान्सर मिसिन
भोल्टेज: 380V50HZ3P, अनुकूलित गर्न सकिन्छ
रेटेड पावर: 11kw
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): 4830 * 1840 * 2150 मिमी
रङ: नीलो, तपाईको आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक हुन सक्छ।
काटन मोटाई: 6-30 मिमी
नियन्त्रण प्रणाली: ESTUN E21S, वैकल्पिक हुन सक्छ
काटन लम्बाई: अधिकतम 8000mm
कोण कोण: 0.5-3 डिग्री
गहिराई गहिराइ: 100mm, तपाईंको आवश्यकताहरु अनुसार डिजाइन गर्न सकिन्छ
भेडा प्लेटको शक्ति: ≤ 450 के.एन. / सीएम
यात्रा समय: ≥10 टाइम्स / मिनेट
सम्पूर्ण संरचना र विशेषताहरु को मिसिन
2. काटन बीम भित्री भित्री ढाँचामा डिजाइन गरिएको छ किनकि, प्लेटहरू तल खसेको छ र उत्पादनको शुद्धता पनि गारंटी गर्न सकिन्छ। समायोज्य रेक कोणले प्लेट विरूपण कम गर्न सक्छ।
3. यूरोपीय संघ सीई प्रमाणीकरण र आईएसओ गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणीकरण द्वारा मिसिन
1. हाइड्रोलिक प्रणालीले जर्मनी रक्स्रोथ वा यूएसए ओएमजी प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छ। फिर्ती स्थिर कार्य प्रक्रिया र सजिलो कामको साथ नाइट्रोजन फिर्ती सिलेंडर द्वारा नियन्त्रण गरिन्छ। हाइड्रोलिक प्रेस ट्राफिक अपरेशन र नाइट्रोजनले राम्रो सहयोग गर्ने कामको साथ माथि पुश-आउट लागू गर्दछ।
2. सिलेंडरमा सबै सील आयात गरिन्छ, सबैभन्दा प्रसिद्ध ब्रान्ड, राम्रो गुणस्तर र उच्च प्रदर्शन
3. हरेक पूरा कार्य चक्र हाइड्रोलिक वाल्व को नियन्त्रण मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। टाढाको समायोजन वाल्वले दीवार बोर्डको दाहिने छेउमा काम गर्ने दबाब समायोजन गर्न सक्छ।
4. ओभरलोड ओभरफ्लो सुरक्षा हाइड्रोलिक प्रणालीमा आउटफिस्ट गरिएको छ, जुन कुनै रिसार्जको आश्वासन दिन सक्छ, र तेल स्तर पढ्न सकिन्छ वा सीधा हेर्न सकिन्छ।
एनसी हाइड्रोलिक क्यान्सर मिसिनको इलेक्ट्रिक नियन्त्रण प्रणाली
1. इलेक्ट्रोनिक घटक आयात गरिएका छन् वा चीन-विदेशी संयुक्त उद्यमबाट, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर, विश्वसनीय सुरक्षा, लामो जीवन, राम्रो विरोधी हस्तक्षेप क्षमताको अनुसार, एक विकिरण एकाइले विद्युतीय क्याबिनेटमा लगाइएको छ।
2. अपरेशन बाकस र सुरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुरक्षा बाकस। सञ्चालन गर्न सजिलो एक चल एकल एकल हात पेडल स्विच गर्नुहोस्।
3. रिजर्भेसनले सुरक्षाको लागि मेशिन र खुट्टा स्विचमा रोकिन्छ र बाड जस्तै शरीरको गार्ड मानक वा हल्का हो।